नवाज शरिफकी छोरीले सार्वजनिक गरेको भिडियोले पाकिस्तानमा हंगामा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नवाज शरिफकी छोरीले सार्वजनिक गरेको भिडियोले पाकिस्तानमा हंगामा
बीबीसी। पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई सनाइएको सजायलाई लिएर राजनीतिक गर्माएको छ। नवाज शरिफकी छोरी मरियम नवाजले न्यायाधीशमाथि दवाबमा परेर सजाय सुनाएको आरोप लगाएकी छन्।
यद्यपी पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार मामिलाको सुनुवाई गर्ने इस्लामावादका जवाबदेही अदालतका न्यायाधीश अरशद मलिकले मरियमले लगाएको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्। मरियमले न्यायाधीश मलिकले नवाज शरिफ विरुद्ध दवाबमा फैसला लेखेको स्वर्य स्वीकार गरेको दाबी गरेकी थिइन्।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज (पीएमएलएन) का नेता मरियम नवाजले आफ्नो दाबीलाई सत्य सावित गर्न शनिबार एक पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
उक्त भिडियोमा न्यायाधीश अरशद मलिक पीएमएलएनका समर्थन नसीर बट्टसँग भनेका छन्–शरिफ विरुद्ध फैसला लेख्नकालागि मलाइ ‘ब्ल्याकमेल गरियो र दवाब’ मा पारियो।’
उक्त भिडियो जारी भएपछि पाकिस्तानमा हंगामा मच्चिएको छ। विरोध हुन थालेपछि न्यायाधीशकातर्फबाट अदालतका रजिस्ट्रारले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोपको खण्डन गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–म स्पष्ट गर्न चाहन्छु की मलाइ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै दवाब थिएन। न कुन लोभ लाचन नै दिइएको थियो। मैलो यो निर्णय स्वयंलाई साक्षी मानेर प्रमाणको आधारमा गरेको हुँ।’
उनले पत्रकार सम्मेलन आफ्नो फैसलालाई धुमिल गर्न र राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन्। उनले आफूमाथि गलत अरोप लगाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारवाहीगर्न मागसमेत गरेका छन्।
न्यायाधीशले आफ्नो बनायमा भनेका छन्–नवाज शरिफ र उनको परिवार विरुद्ध सुनुवाईका क्रममा उनका प्रतिनिधिले मलाइ बारम्बार घुस दिने कोशिश गरे र मैले उनीहरुलाई सहयोग गर्ने स्थिति नरहेपछि मलाइ गम्भीर नतिजा भोग्न तयार हुन धम्की पनि दिएका छन्।’
उनले भने–यदि मैले दवाब वा लोभ लालचमा परेर फैसला लेख्थे भने एउटा अभियोगमा रिहा र अर्कोमा दोषी करार गर्दिन थिएँ।’
न्यायाधीश मलिकले चार डिसेम्बर २०१८ मा पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई अल अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार काण्डमा सात वर्षको जेल सजाय सुनाएका थिए। तर त्यही दिन फ्ल्गाशिप इनभेपष्टमेन्ट मामिलामा भने निर्दोष रहेको फैसला सुनाएका थिए।
मरियम नजावले पत्रकार सम्मेलनमा पनामा विषयमा नवाज शसिफलाई जेल पठाउने न्यायाधीश अरदश मलिकमाथि अज्ञान मानिसले दवाब दिएको आरोप लगाएकी थिइन्।
मरियमले उनका बुवालाई अब धेरै समय जेलमा बन्द गरेर राख्नु उचित हुँदैन। उनले भिडियोलाई प्रमाणको रुपमा इस्लामावाद उच्च अदालतमा पेश गर्ने संकेत गरेकी छन्।
इमरान खान सरकारले भने भिडियोको फरेन्सिक जाँच गर्नुपर्ने बताएको छ। सरकारले यसलाई न्यायपालिकामाथिको आक्रमण संज्ञा दिएको छ। सूचना तथा प्रसारण मामिलामा प्रधानमन्त्रीका सहयोगी फिरदौस आशिकले भिडियोको जाँच हुने बताएका छन्।
६९ वर्षीय पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पीएमएलएनका प्रमुख नजाव शरिफ यतिबेला लाहोरको कोट लखपत जेटमा बन्द छन्।